Herinandro masina tao Goatemalà: Tsy ankasitrahana ireo AntiKristy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Septambra 2018 15:42 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny Aprily 2007)
Manana lova izay tsy ahitana ny Katolika ihany i Goatemala, izay zanatany Espaniôla teo aloha, fa koa ahitana fomban-drazana Espaniôla tafiditra amin'izany, anisan'izany ireo fomba fiteny sy fomban-drazana masina indrindra mandritra ny herinandro masina, na “Semana Santa”.
Manana bilaogy ara-lohahevitra mandrakitra ny fomban-drazana Katolika rehetra ao Goatemalà ahitana fanavaozam-baovao isan'andro ao amin'ny “Cuaresma y Semana Santa ao Goatemala” an'ilay bilaogera Victor Arriaza izay ahitanao ny sariny sy ny El blog del Cucurucho.
Ao Antigua Goatemalà, mankalaza ny “herinandro masina malaza manerantany” miaraka amin'ireo fampisehoana ara-pivavahana sy loko marevaka ny tanàna, araka ny hitanao ao amin'ny Antigua Daily Photo, izay manaraka ny fomban-drazana sasany amin'ny herinandro. Azonao fantarina hoe inona ny “cucurucho”, na ny antony maha-zava-dehibe ny “karipetra” any Goatemala.
Fomban-drazan'ny fiarahamonina ny fanamboarana karipetra amin'ny taimbakona, fanjaitra, voninkazo sy legioma. Mitambatra isam-bondrona na mpifanolo-bodirindrina akaiky ny olona mba hanamboatra karipetra izay handehanan'ny filaharambe. Indraindray atao amin'ny alina ny fanamboarana karipetra, mandritra ny alina manontolo mba hahavonona azy ireo amin'ny filaharambe ny ampitso.
Mpandala ny nentin-drazana ny ankamaroan'ny fivavahana ao Goatemala. Na dia samy ampiharina aza ny katolika ary latsadatsaka kely ny protestanta, toa mbola tsy ekena ny fanehoana hafa ny ara-panahy. Nitsidika ny firenena intelo ny Papa Jean Paul II teo aloha. Ankalazana ny fetibe katolika ny ankamaroan'ny andro tsy fiasana ao Goatemala ary mbola manana fiantraikany amin'ny karazana raharaha ofisialy rehetra ny fiangonana.
Saingy mihamitombo ny fivavahana sy ny sekta hafa. Firenena ahitana fifanoheranjavatra i Goatemalà. Ankehitriny dia misy vitsivitsy antsoina hoe “sekta antikristy”. Iray tamin'izy ireo ny “Creciendo en Gracia” izay niseho tamin'ny herinandro lasa tamin'ny lohatenin'ireo lahatsoratra bilaogy maromaro. Nikasa hitsidika an'i Goatemalà sy hampiroborobo ny foto-pampianarany ny mpitarika ny sekta, José Luis de Jesus Miranda, fantatra ihany koa amin'ny hoe “Papi”. Niantso ny tenany ho “antikristy” izy. Nahatonga ny tsirairay hanoratra momba izany ny fanambarana ny fitsidihany.
Say something! [ES] nanoratra fa nomanina ho an'ny herinandro faharoa amin'ny volana Aprily ny fitsidihany, tsy navela hiditra izy ireo na dia tany El Salvador sy Honduras aza. “Papi viene a Guatemala [ES]” (“Tonga ao Goatemala i Papi”) no lohatenin'ny lahatsorany, ary mifandray amin'ny AP News ihany izy. Ny tena mahavariana, na dia izany aza, dia ny filazana fanehoan-kevitra, izay nahitana resaka mafana ho an'ny mankasitraka na manohitra ny fitsidihany.
Comunicando [ES] nanampy hoe:
Ny tanjon'ny vaovao fitsidihany dia mba hiezaka sy hahatonga fanehoan-kevitra sy adihevitra misokatra momba io lohahevitra io. Efa nanomboka nahazo mpanaraka sasany sahady izy ireo teto Goatemala. Farafahakeliny, olona 100 no milaza fa miaraka aminy. Mamaritra ny tenan'izy ireo amin'ny tatoazy “666” na “SSS” izy ireo. Milaza izy ireo fa afaka amin'ny fahotana.
Ana nanoratra hoe:
Hatramin'izao dia tsy nilaza ireo manampahefana Goatemalteka fa handà ny fidirany, saingy tsy ho mahagaga raha handà ny fidirany tahaka ireo mpifanolo-bodirindrina amintsika mitovy fomba fijery, noho ny ahiahy fiarovana ny fivavahana.
Bilaogera Voces de Guatemala [ES] nanampy hoe:
Any Guatemala, na dia feno finoana sy mahakristiana aza ny herinandro masina dia maro ireo olona misafidy ny hanana herinandron'ny fahafinaretana, herinandro feno fihoaram-pefy, manararaotra ny fotoana tsy fiasana mba handehandehanana, hisotrosotroana, hidorohana zava-mahadomelina sy hanaovana firaisana ara-nofo.
Ny zava-dehibe tsara atao an-tsaina dia manaja ny fahalalahana ara-pinoana ny Lalàm-panorenana Goatemalteka. Amin'ny ankapobeny dia fanjakana laika izy ary tsy maintsy manaja ny zon'ny fahalalahana ara-pinoana voalaza ao amin'ny Fifanekena Iraisam-pirenena momba ny zo fototra sy politika.